Jaceyl Maku hayaa Oo makugu adagtahay sidaa ugu sheegan lahayd qofka Jecleed (Wadadaan Mar ). - iftineducation.com
Jaceyl Maku hayaa Oo makugu adagtahay sidaa ugu sheegan lahayd qofka Jecleed (Wadadaan Mar ).
aadan21 / September 6, 2016
iftineducation.com – Jaceyl Maku hayaa Oo makugu adagtahay sidaa ugu sheegan lahayd qofka Jecleed (Wadadaan Mar ).
aceylku waa dareen gudaha ah,mana dhinto, waxaa jiraan dad badan oo aan jecelnahay,laakin wey adag tahay inaad qirato jaceylkaas. Hadii aad xiiseyneyso inaad ogaato sidii aad ugu sheegan laheyd jaceylkaas raac talooyinkaan.
Inta aada qoftaas u sheegan dareenka aad u qabto waa inaad marka hore hubisaa in qofkaas laf ahaantiisu ku jecel yahay iyo in kal,Ha u qiran jaceyl qof ku jeclaan doonin weligiis.
Xusuusnaaw in jaceylkaagu uu yahay mid qiimo sare leh, marka hore iska hubi qofkaad u sheeganeyso xanuunka qalbigaaga inuu yahay mid kuu qalma,waayo qof aan laheyn dareemo kuma siin karo jawaab aad ku faraxdo,sidaas daraadeed waa inaad garwaaqsataa qiimaha jaceylkaaga,markaas kadib waad u sheegi kartaa.
Hamiga doorweyn ayuu ka cayaaraa inuu garabkaasiiyo kalsooni aad ku hor istaagto qofka aad jeceshahay,waayo cabsida iyo xishoodka in dalabkaaga fashilmo ayaana sabab u ah arintaas.
Ha ugu sheegin dareenka caashaqaaga meelkasta.hamigaagu waa inuu noqdaa mid aad u wanaagsan, waayo daqiiqadahaas noloshaadu waxey yeelaneysaa weji cusub.sidaa darteed hubi inaad doorato goob ku haboon inaad kula kulanto,waxey arintaas kaa caawineysaa in si degan oo fudud aad ugu sheegto jaceylkaaga.
U sheeg inaad rabto inaad kala hadasho arin muhiim ah,sidaasdarteedna aad u dooneyso inaad ula kulanto,waxaana qofku ku fekeraayaa fikrad ah in wax qaas ah ay dhici doonaan.
Mustaqbalka wixii dhici raba marwalbo lama saadaalin karo. Mana ogid najiida qirashada jecylkaaga,laakin waa inaad ogaataa marka aad labadiina aad kulan leedihiin,ma awoodid inaad gadaal fiirisid,horey u soco hana baqan u sheeg marxalada aad ku sugan tahay. Natiijadu waxey noqon karaa guul ama guuldaro,laakin marwalbo noqo mid qeyrka rajeeya.
Dabadhilif ayaa dalka ku soo batay hala yaabin kuwan
dumarka shumis jeclaa daawo